HAG vs beesha Shiidle | allsanaag
HAG vs beesha Shiidle
Alshabaab General laga dhigay si beeshiisa loogy qanciyio Caddalad xumadii lagu sameeyey
Odayaasha uu ka soo jeeda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Culusoow oo iyagu wada qaatay xilalakii maamulka dhowaan la sameeyey ee Hirshabeele, ayaa hadda shir ay ku qabteen magaaladA Jowhar ee xarunta Gobolka Shabeelha dhexe waxay ku sheegeen in Maxamuud Xaaji Axmed Cali Sheegoow oo ka soo jeeda beesha Shiidle ” inay u caleemo saareen Generaal.” Waa markii u horaysay taariikhda caalamka Sarkaal la caleemo saaro.
Sheegow ayaa wuxuu ka soo jeeda beesha Shiidle ee ugu degaanka weyn gobolada Hiiraan iyo Shabeelha dhexe, hase ahaatee Koonfurta Soomaaliya looga yaqaan looma ooyaan. Madaxweynihii maamulka Hirshabeele, madaxweyne ku xigeenkii iyo gudoomiyihii baarlamaanka maamulkaas waxa wada qaatay beesha Hawiye. Sharuuda qura ee lagu xiray samaynta maamulkaas waxay ahayd in beesha Xawaadle aan lagula tartamin madaxweynaha.
Hoos ka daawo Odayaasha beelaha Hawiye oo qancinaya beesha Shiidle oo Jowhar ku caleemo saaraya Generaal horay uga mid ahaa Ururka argagixisada Alshabaab ee gacan saarka la leh in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfurta Soomaalihya
← Allsanaag iyo Xildhibaanada Maakhir Hayland oo maamul la magcaabay →